Friends of MoeMaKa - Free Burma News Collection | Archives | 2016 | March
Posted on March 31, 2016 by freeburma
သမ္မတသစ် ဦးထင်ကျော် ခေါင်းဆောင်တဲ့ အမျိုးသား ကာကွယ်ရေးနဲ့ လုံခြုံရေးကောင်စီကို ဖွဲ့စည်းကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးက ကြေညာပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင်[…]
The post အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီဖွဲ့စည်း appeared first on DVB.
via DVB http://ift.tt/1TjZXMl http://burmese.dvb.no
Posted on March 30, 2016 by freeburma
ကြိုးပမ်းလုံးပန်းရကျိုးနပ်တယ် – သူရဦးတင်ဦး
နှစ်ပေါင်း ၂၇ နှစ်ကြာ အဖိနှိပ်ခံပါတီအဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ဟာ ၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရပြီး[…]
The post ကြိုးပမ်းလုံးပန်းရကျိုးနပ်တယ် – သူရဦးတင်ဦး appeared first on DVB.
via DVB http://ift.tt/1MTFfMF http://burmese.dvb.no
NLD ကိုယ်စားလှယ် ဦးညီပုကို ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် အတည်ပြုခန့်အပ်
ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် NLD ပါတီ ဂွမြို့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးညီပုကို အဆိုပြုထားတာကို ရခိုင်အမျိုးသားပါတီက ကန့်ကွက်ခဲ့ပေ မယ့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်က ဒီကနေ့ အတည်ပြုခန့်အပ် လိုက်ပါတယ်။
via သတင်းများ http://ift.tt/1Rr6fbI http://www.rfa.org
နေပြည်တော်၊ မတ် ၃၀ ။ ။ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းကို နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော်က လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များထံ ဖြန့်ဝေထားပြီး မတ်လ ၃၁ရက် လွှတ်တော်တွင် အဆိုတင်သွင်းဖွယ် ရှိကြောင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များထံမှ သိရသည်။
via မဇ္ဈိမ မာလ်တီမီဒီယာ http://ift.tt/1Rr6eVb http://ift.tt/1nfHMox
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဌဟောင်း ဦးတင်အေးက ဥက္ကဌအသစ် ဦးလှသိန်းကို မတ်လ ၃ဝ ရက်နေ့ က နေပြည်တော်မှာ တာဝန်လွှဲပြောင်းစဉ်။ Photo: Union Election Commission Facebook
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့သစ်ထံ ကော်မရှင်ဥက္ကဌဟောင်း ဦးတင်အေးက တာဝန်လွှဲပြောင်းပေး အပ်တဲ့ အခမ်းအနားကို နေပြည်တော်က ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးမှာ ဒီကနေ့ နေ့လည်က ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
via သစ်ထူးလွင် (နေ့စဉ်သတင်း) http://ift.tt/232xvRS http://ift.tt/Y2RpwJ
မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်လာသူ ဦးမင်းမင်းဦးက မွန်ပြည်နယ်မှာ အဓိကကျတဲ့ ရာဘာထုတ်လုပ်မှု စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဦးမော့လာအောင် လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ ပြောဆိုလိုက်ပြီး၊ တချိန်တည်းမှာ မွန်ပြည်နယ်တွင်းက တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ စာပေယဉ်ကျေးမှု မြှင့်တင်ရေး အစီအစဉ်တွေကို ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကို ရွေးချယ်ရာမှာ မွန်တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်ထဲက ရွေးချယ်
via သစ်ထူးလွင် (နေ့စဉ်သတင်း) http://ift.tt/1qgu8Zn http://ift.tt/Y2RpwJ
Posted on March 29, 2016 by freeburma
တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်မှာ အခြေစိုက်ပြီး တနိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA ကို လက်မှတ်မရေးထိုးသေးတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေရဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေဆွေးနွေးပွဲကို ၀တပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ် ပန်ဆန်းမှာ ၃ ရက်ကြာကျင်းပခဲ့ပြီး အစိုးရသစ်နဲ့ အမြန်ဆုံး နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ တဆက်တည်းမှာပဲ ရှမ်းနဲ့ ပလောင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြား ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ပဋိပက္ခတွေ ရပ်ဆိုင်းပြီး နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒီသတင်းကို ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းရဲ့ သတင်းထောက် ကိုမိုးဇော်က…
via Voice of America http://ift.tt/1PDjjVU http://ift.tt/Tf1V41
သပိတ်မှောက်ခဲ့သော ရခိုင်အမျိုးသားပါတီမှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကို တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ − အီးပီအေ)
နိုင်ငံတော်သမ္မတသစ်ဦးထင်ကျော် အဆိုပြုထားသည့် ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးညီပု၏ အမည်ကို ပြည်နယ်လွှတ်တော်၌ ကြေညာသည့်အချိန်တွင် ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်များက လွှတ်တော်ခန်းမအတွင်းမှ ထွက်ခွာကာ သပိတ်မှောက်ခဲ့ ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မတ်လ ၂၈ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့ သည့် ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒု တိယအကြိမ်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဉ္စမနေ့တွင် အထက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ လွှတ် တော်အစည်းအဝေးခန်းအတွင်း၌လည်း အဆိုပါလွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ်များက ရင်ဘတ်တွင် စတစ်ကာ အမည်းများ ကပ်ကာ ကန့်ကွက်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည် ဟု သတင်းရရှိသည်။
ယခုကဲ့သို့ ဖြစ်ရပ်မှာ မဖြစ်သင့်သည့်လုပ်ရပ်ဖြစ်ပြီး ပြည်သူများကိုယ်စားရွေးချယ်ထားသည့်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ လုပ်ရပ်မှာရခိုင်ပြည်သူများ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကိုကျဆင်းစေကြောင်း စစ်တွေမြို့ခံတစ်ဦးကပြောသည်။
‘‘လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တွေဆိုတာ ပြည်သူရွေးချယ်ထား တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေ ဖြစ်ပါ တယ်။ အဲဒီအတွက် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ လုပ်ရပ် ဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ လုပ်ရပ်လိုသ ဘောသက်ရောက်သွားပါတယ်။ အမှန်က ကန့်ကွက်တယ်ဆိုရင် တောင် ခန်းမထဲက ထွက်သွားတဲ့ အဆင့်ထိတော့ မဖြစ်စေချင်ပါ ဘူး’’ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီသည် ရခိုင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်နှင့်ပြည် နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကို ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းခွင့်ရရှိရန် လိုလားနေကြပြီး ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကို ဦး ဆောင် ဖွဲ့စည်းခွင့်မရပါက အ တိုက်အခံ ပါတီအဖြစ် ရပ်တည် သွားရန် သဘောထားကြေညာ ချက်အမှတ်(၁/၂၀၁၆)ကို ထုတ် ပြန်ထားသည်။
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ၏ ထုတ်ပြန်ချက်များကို ထောက်ခံ ကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်အချို့တွင် လူထုဆန္ဒ ထုတ်ဖော်ပွဲများ ပြုလုပ်နေကြ သော်လည်း သမ္မတသစ် ဦးထင် ကျော်က ဒီချုပ်အမတ်ဦးညီပုကို ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် အဆို ပြုခြင်းမှာလူထုဆန္ဒအလေးထား ရာ မရောက်ကြောင်း ဆန္ဒထုတ် ဖော်ပွဲကို ဦးဆောင်သူများက ဆို သည်။ ANP ကိုယ်စားလှယ်များကအထက်ပါအတိုင်း သပိတ်မှောက်ခဲ့သော်လည်း ဒီချုပ်အစိုးရက တင်သွင်းသည့် ၀န်ကြီးချုပ်အား တရားဝင်ကန့်ကွက်ရန် ပါတီက တစ်စုံတစ်ရာညွှန်ကြားထားခြင်းမရှိကြောင်း သိရသည်။
‘‘သူတို့ရဲ့ စိတ်မှာ မကျေမနပ်ဖြစ်တာကို ပြတဲ့သဘောပါ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ကန့်ကွက်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ အင်န်အယ်လ်ဒီကိုကန့်ကွက်တာလည်းမဟုတ်ဘူး’’ ဟု ANP အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးထွန်းအောင်ကျော်က ပြောသည်။
နိုင်ငံတော် သမ္မတသစ် ဦး ထင်ကျော်က ပြည်နယ်ဝန်ကြီး ချုပ်အဖြစ် ဦးညီပုအား အဆိုပြု ထားသည့် သတင်းများ မတ်လ ၂၇ ရက်က ထွက်ပေါ်လာပြီး နောက် ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ၏ အရေးပေါ်အစည်းအဝေးကို မတ်လ ၂၇ရက် ညနေပိုင်း တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
၀န်ကြီးချုပ်အဖြစ် အမည်စာရင်းတင်သွင်းခံရသည့် ဦးညီပုကို ကန့်ကွက်လိုသူရှိပါက မတ်လ၂၉ ရက် ညနေ ၄ နာရီနောက်ဆုံးထား၍ ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးဖိုးမင်းက 7Day Dailyအားပြောသည်။
via Politics http://ift.tt/1qe9Lfs http://ift.tt/1OVjJZO
နောက်ထပ် ဝန်ကြီးချုပ် ၆ ဦး အတည်ပြု
မွန်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်အသစ် ဦးမင်းမင်းဦး ကို တွေ့ရစဉ်။ Photo: RFA
မန္တလေး၊ မကွေး၊ စစ်ကိုင်း၊ ကယား၊ ချင်း၊ မွန် စတဲ့ တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေက တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ၆ဦးကို ကန့်ကွက်သူမရှိ အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။
မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ဒေါက်တာ မြင့်နိုင်၊ မကွေးတိုင်း
via သစ်ထူးလွင် (နေ့စဉ်သတင်း) http://ift.tt/1LX0sdP http://ift.tt/Y2RpwJ
၂၀၁၁ ခုနှစ်က စတင်တင်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ခေါင်းဆောင်တဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီအစိုးရ သက်တမ်းကာလ ၅ နှစ် မနက်ဖြန် မတ်လ[…]
The post အတိုက်အခံအန်အယ်ဒီပါတီက နိုင်ငံအာဏာမနက်ဖြန်လွှဲပြောင်းယူရယူမည် appeared first on DVB.
via DVB http://ift.tt/1LX0r9E http://burmese.dvb.no
တရုတ်က ကျနော်တို့ကို အကြွေးတောင်းသလို တခါလာလည်း ဒီမြစ်ဆုံဆည်လုပ်မယ်၊ တခါလာလည်း မြစ်ဆုံဆည်လုပ်မယ်နဲ့ – ဦးခင်မောင်မြင့်
အမျိုးသားလွှတ်တော် သတ္တုသယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီဝင်၊ အန်အယ်လ်ဒီပါတီရဲ့ ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်မောင်မြင့်ကို မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းကိစ္စ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်[…]
The post တရုတ်က ကျနော်တို့ကို အကြွေးတောင်းသလို တခါလာလည်း ဒီမြစ်ဆုံဆည်လုပ်မယ်၊ တခါလာလည်း မြစ်ဆုံဆည်လုပ်မယ်နဲ့ – ဦးခင်မောင်မြင့် appeared first on DVB.
via DVB http://ift.tt/1PCpSrH http://burmese.dvb.no
Posted in Projects - စီမံကိန်းများ၊ လုပ်ငန်းများ ဆိုင်ရာ	| Tagged Environment, Feedly, IFTTT, Intelligence, Projects, Recently Read	| Leaveacomment |
Posted in Intelligence - နောက်ခံအကြောင်းအရာ ဆိုင်ရာ	| Tagged Environment, Feedly, IFTTT, Intelligence, Projects, Recently Read	| Leaveacomment |
via moi http://ift.tt/21QouJh http://ift.tt/1KnLGaX
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းအရေးပေါ် အခြေအနေကြေညာထားထားတာကို သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က အစိုးရသက်တမ်း ကုန်ခါနီးရက်ပိုင်းအလိုမှာ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းကြောင်း မတ်လ ၂၈ ရက်နေ့စွဲနဲ့[…]
The post ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာချက် ရုပ်သိမ်း appeared first on DVB.
via DVB http://ift.tt/22JkfVu http://burmese.dvb.no
လက်ရှိ ရှိနေတဲ့အခွင့်အရေးမှာပဲ သာယာနေတယ်ဆိုရင်လည်း အဂတိထဲမှာ ပါနေပြီ။ ဒါတွေကို ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြုပြင်ကြရမယ်။
via Voice of America http://ift.tt/1MxrvMC http://ift.tt/Tf1V41
ဝ အပါအဝင် လက်နက်ကိုင် ၇ဖွဲ့ အစိုးရသစ်နှင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်
ဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီအပါအဝင် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း ၇ ဖွဲ့က အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD)အစိုးရသစ်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးရန် အပါအဝင် အချက် ၂ ချက်ကို သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ချက်ခဲ့သည်။
ဝ ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ(UWSP) ဌာနချုပ် ပန်ဆန်းမှာ မတ်လ ၂၆ ရက် မှ ၂၈ ရက်ထိ သုံးရက်ကြာ ပြုလုပ်သော အစည်းအဝေးတွင် မျက်မှောက် ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေး အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးဖလှယ်ခဲ့ကြကာ တက်လာမည့် NLDအစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ဆန္ဒရှိပြီး အမြန်ဆုံး နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရန် သဘောတူညီချက် ရရှိခဲ့သည်ဟု မတ်လ ၂၈ ရက်က ကြေငြာချက် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
ထို့ပြင် ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ/ရှမ်းပြည်တပ်မတော် (RCSS/SSA)နှင့် ပလောင် အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်(TNLA)တို့ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားနေမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ညှိနှိုင်းခဲ့ကြပြီး နှစ်ဖက် တပ်များအကြား ချက်ချင်း အပစ်ခတ်ရပ်စဲရန်၊ နှစ်ဖက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးသည့် နည်းလမ်းဖြင့် ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းသွားရန် တိုက်တွန်း တောင်းဆိုခဲ့သည်။
“အကယ်၍ တဖက်က ပဋိ့ပက္ခ ဖြစ်ပွားအောင် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်နေပါက တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်းများသည် ပူးပေါင်း၍ တားဆီးကာကွယ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သဘောတူခဲ့ကြပါသည်”ဟု ကြေငြာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ယင်းအပြင် မြန်မာ့တပ်မတော်မှ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် ထိုးစစ်ဆင်လှုပ်ရှား တိုက်ခိုက်နေမှုများကို ချက်ချင်း ရပ်တန့်ရန် တောင်းဆိုထားပြီး ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးအတွက် အချက်အလက်ကောင်းများ ဖန်တီးသွားရန် သဘောတူခဲ့သည်ဟု ထုတ်ပြန်ထားသည်။
UWSP အပါအဝင် ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (KIO)၊ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ၊ ရှမ်းပြည်တပ်မတော်(SSPP/SSA)၊ မိုင်းလား ခေါ် အမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ် တပ်ပေါင်းစု NDAA)၊ ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ ခေါ် မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီ မဟာမိတ် တပ်မတော် (MNDAA)နှင့် ပလောင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး (PSLF)နှင့် ရက္ခိုင့်တပ်မတော်(AA)မှ ကိုယ်စားလှယ် ၃၄ ဦး တက်ရောက် ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
လက်ရှိ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားနေသော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများသာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အခြား အပစ်အခတ် မရပ်သေးသော မွန်ပြည်သစ်ပါတီ(MNSP)၊ ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ (KNPP)အဖွဲ့တို့အား ဖိတ်ခေါ်ခြင်း မရှိဘဲ သီးသန့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
UWSA ဌာနချုပ် ပန်ဆန်းတွင် ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလကလည်း အစိုးရနှင့် NCA လက်မှတ်မရေးထိုးသေးသော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း ၁၂ ဖွဲ့မှ ခေါင်းဆောင်များ မျက်နှာစုံညီ ထိပ်သီးအစည်းအဝေး ကျင်းပခဲ့ပြီး ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ဖြစ်ပွားနေသော တိုက်ပွဲများ ရပ်တန့်ရန် အပါအဝင် အချက် ၇ ချက် တောင်းဆိုခဲ့သည်။
via မဇ္ဈိမ မာလ်တီမီဒီယာ http://ift.tt/1URzUgy http://ift.tt/1nfHMox
မြေယာပြဿ နာနဲ့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး လုပ်ဆောင်မယ် – ဒေါက်တာလဲ့လဲ့မော်
သမ္မတအဖြစ် ရွေးကောက်ခံထားရသူ ဦးထင်ကျော် လက်မှတ်ထိုး အတည်ပြုထားတဲ့ ပြည်နယ်တိုင်းလွှတ်တော်အသီးသီးမှာ အန်အယ်လ်ဒီက တင်သွင်းတဲ့ ၀န်ကြီးချုပ် အမည်စာ[…]
The post မြေယာပြဿ နာနဲ့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး လုပ်ဆောင်မယ် – ဒေါက်တာလဲ့လဲ့မော် appeared first on DVB.
via DVB http://ift.tt/1qbhg6K http://burmese.dvb.no
Posted in People Profiles	| Tagged Cabinet, People Profile, Recently Read	| Leaveacomment |
လာမယ့် မတ်လ ၃ဝ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမယ့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် မှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတအဖြစ် ရွေးချယ် တင်မြှောက်ခံထားရသူ ဦးထင်ကျော်နဲ့ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးတွေက ကတိသစ္စာပြုကြပြီး သမ္မတ ဦးထင်ကျော် က မိန့်ခွန်းပြောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။
via သတင်းများ http://ift.tt/1ogGnnh http://www.rfa.org
Posted in Cabinet - အစိုးရအဖွဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာ	| Tagged Cabinet, Feedly, IFTTT, People Profile, Recently Read	| Leaveacomment |
လူငယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှိုနှင့် မေးမြန်းချက်
သမ္မတအဖြစ်ရွေးကောက်ခံထားရသူ ဦးထင်ကျော် လက်မှတ်ထိုး အတည်ပြုထားတဲ့ ပြည်နယ်တိုင်းလွှတ်တော်အသီးသီးမှာ အန်အယ်လ်ဒီက တင်သွင်းတဲ့ ၀န်ကြီးချုပ် အမည်စာရင်း တွေမှာ[…]
The post လူငယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှိုနှင့် မေးမြန်းချက် appeared first on DVB.
via DVB http://ift.tt/1UpNW9l http://burmese.dvb.no